आज २७८ जनामा कोरोना पुष्टी, कहाँ कति थपिए ? हेर्नुहोस्…
June 5, 2020 1477
शुक्रबार थप २७८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्र’मण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दियो। देशका विभिन्न प्रयोगशा’लामा गरिएको परीक्षणमा प’छिल्लो पटक थप २७८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देव’कोटाले जानकारी दिएका हुन्।
कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा सुनस’रीका ८, झापाका ११, मोरङका ६ जनामा कोरोना भाइर’सको संक्र’मित भेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाले जान’कारी दिएका छन्।
रुपन्देहीको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोग’शालमा गरिएको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका १, नवलपरासीका २, पाल्पाका १ जना, रुपन्देहीका १८ जनामा कोरोना संक्र’मण भेटिएको छ। यस्तै हेटौं’डाको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सिन्धुली र बाराका दुईदुई जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
गण्डकीको प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परी’क्षणमा तनहुँका दुई जनाको पनि कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ। यस्तै धरानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा भोजपु’रका ५, झापाका १ र सुनस’रीका १३ जनामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रम’ण देखिएको छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा कैलालीका ४, अघामका १, बझाङका १, डडेल्धुराका १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ। काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशा’लामा रामेछापका १७ र काभ्रेका ५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ पाइएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका ९० र जुम्लामा रहेका ७ जनाको रिपोर्ट पोजे’टिभ आएको छ। जुम्लाका ७ मध्ये ४ जना भने अन्य जिल्लाका हुन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा सुर्खेत र दाङका एकएक ज’नामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरि’एको परीक्षणमा ७४ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ। उनीहरूमध्ये बा’राका १ जना छन्। काठमाडौंमा रहेका गुल्मी र कास्कीका एकएक जनामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखि’एको छ। सोही प्रयोगशा’लामा कपिलवस्तुका ४४, धनुषाका ४, महोत्तरीका १७ र रौतहटका ६ जनामा पनि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ।
शुक्रबार देशभरमा २ सय ६७ जना पुरुष र ११ जना महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखि’एको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। हालसम्म २ हजार ७ सय १७ जना पुरुषमा कोरोना संक्र’मण पुष्टि भएको छ भने १ सय ७५ महिला यो भाइरसबाट संक्र’मित भएका छन्।
उनका अनुसार हाल’सम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २९१२ पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका ३३३ जना उपचारपछि नि’को भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रम’णका कारण ११ जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। नेपाल लाईभ
Prevविदेशमा रहेका नेपाली फर्कन थाले, म्यानमार बाट २६ नेपाली आए (भिडियोसहित)
Nextजबर्जस्ती बजार खोलेपछि काठमाण्डौमा कतिको छ त चहलपहल??..हेर्नुहोस्